Ciidamada Kenya iyo Itoobiya Oo lagu weeraray Jubbooyinka iyo Hiiraan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamada Kenya iyo Itoobiya Oo lagu weeraray Jubbooyinka iyo Hiiraan.
On Jul 1, 2020 345 0
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qaaday weeraro cul culus oo beegsaday ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya oo kamid ah Shisheeyaha duulaanka gardarada ah ku jooga Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobollada Jubbooyinka ayaa xaqiijinaya in ciidamo aad u hubeysan oo katirsan milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay duulaan ballaaran ku qaadeen difaacyada ciidamada Kenya ee jaziiradda Kudhaa.
Dagaalka waxa uu ahaa mid aad u culus, oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona lasoo warinayo inuu jiro khasaare gaaray Kenyaatiga.
Sidoo kale guutooyinka Madaafiicda ee ciidamad Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duqeeyey saldhiga ciidamada Kenya ee deegaanka Cabdalla Biroole ee duleedka magaalada Kismaayo.
Duqeynta oo in muda ah socotay waxay dhalisay khasaare ba’an oo gaaray ciidamada Kenya, waxaana usoo degatay diyaarad nooca hellicopterka ah, taas oo Kismaayo u qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada Kenyaatiga.
Xitaa askarta Kenyaatiga awood uma lahan iney isaga kala gudbaan Kismaayo iyo deegaannada u dhow, taasina waxaa ugu wacan weerarada joogtada ah ee ay kala kulmaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo daadsan deegaannada howdka ah.
Dhinac kale, wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in ciidamada Mujaahidiinta ay weerareen saldhiga ciidamada xabashida Itoobiya ee Halgan.
Dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaas ku dhexmaray ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa Itoobiyaanka, waxaana la heynin faafaahin dheeraad ah.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dadka Soomaaliyeed waxay ka aaminsanyihiin iney yihiin dhalinyaro xurnimo u dirir ah, waana cidda keliya ee maanta awood ku wajaheysa Shisheeyaha noocyada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga Soomaaliya.
Wararka naga soo gaaraya magaalada barakeysan ee Al-Qudus ayaa tilmaamaya in weerar keligii duulnimo oo…